February 26, 2020 1570
नेपाल प्रह’रीका पूर्वडी’आईजी रमेशप्रसाद खरेलले नयाँ पार्टी खोल्‍ने भएका छन् । पार्टी स्थापनाको उद्देश्यले उनले ‘हाम्रो नेपाल हामी नेपाली’ नामक अभियान आफ्नै संयोज’कत्वमा स्थाप’ना गरेका हुन् । अभियानको औप’चारिक घोषणा भने आगामी बिहीबार एक कार्यक्रमबीच गरिने खरेलले जनाए ।
भ्रष्टाचा’र विरो’धी अभिया’न, सुशासन, राष्ट्रहित, नागरि’कका हक अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर अभियानलाई सक्रि’य बनाइने बताए। सुरुको ६ महिनासम्म संगठनलाई अभियानको रुपमा जनता’माझ लैजाने र त्यसपछि प्राप्त सल्लाह, सुझावअ राजनीतिक दलका रुपमा अघि बढाउने योजना खरेलको छ।
खरेल संयोजक रहेको अभियानमा रक्षा मन्त्रालयका पूर्व कायम मुकायम सचिव देवेन्द्र सिटौला, आफूलाई भ्रष्टा’चार वि’रोधी अभियन्‍ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाही लगायत पनि आबद्ध छन्। पूर्वप्रशा’सक, पूर्वसुरक्षा’कर्मी, पूर्वप्राध्यापक लगायत लाई पनि संगठनमा ल्याउ’नेबारे छलफल भइ’रहेको बताइएको छ।
Prevसन्तोष दाई अर्को बिहे गर्ने त’यारी, छोराछो’रीको कै अगाडी प्रमि’लाको रुवाबा’सी (भिडियो सहित)
Nextह्वा’त्तै घ’ट्यो सुनको भाउ , आजको यस्तो छ रेट ! हेर्नुहोस्
दुःखद खबर: बैतडीमा गाडी दु:र्घटना !
खुशीको खबर : कोरियाले ३ महिना भिषा थप्ने